လေနတ်ဘုရားကြီး ဇလာတန် ရဲ့ နောက်ထပ် ဘုံနန်း က ဘယ်နေရာဖြစ်လေမလဲ . . . - SPORTS MYANMAR
လေနတ်ဘုရားကြီး ဇလာတန် ရဲ့ နောက်ထပ် ဘုံနန်း က ဘယ်နေရာဖြစ်လေမလဲ . . .
ဇလာတန် အီဘရာ ဟီမိုဗစ်ချ် ရဲ့ အမေရိကန် စွန့်စား ခန်းတွေ က တော့ အဆုံးသတ် သွားခဲ့ ပါပြီ ။ LAFC နဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ MLS Cup ရှုံးထွက်ပွဲ မှာ LA Galaxy အတွက် ဂိုးသွင်း ပေးခဲ့ ပေမယ့် ပြိုင်ဘက် ရဲ့ အနိုင် ရလဒ်ကို မဟန့်တား နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ တုန်းက အမေရိက ကို ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့တဲ့ ဇလာတန် ရဲ့ ခရီးစဉ် ဟာ ဒီနေရာမှာ ပြီးဆုံး သွားခဲ့ပြီး နောက်ထပ် နယ်မြေသစ် ကို ရှာဖွေ ဖို့ လုပ်ဆောင် ရတော့မှာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဇလာတန် ဟာ ကွင်းအတွင်း မှာ ဂိုးသွင်း ကောင်း သလို ကွင်း အပြင် မှာ လည်း စကားပြော ကြွယ်သူ အဖြစ် လူသိ များပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ပွဲပြီး အင်တာဗျုးတွေ ၊ သတင်းထောက် တွေကို ဖြေကြားချက် တွေ ဟာ အင်္လကာ မြောက်မှု တွေ ပိုခဲ့တာ ကြောင့် မီဒီယာကြိုက် ကစား သမား တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
LAFC ကို ရှုံးနိမ့်ပြီး အမေရိက စစ်မြေပြင်မှာ အောင်မြင်မှု မရခဲ့ ပေမယ့် ဇလာတန် ရဲ့ စကားလုံး လက်နက်တွေ ကတော့ အစွမ်း လျော့သွားခြင်း မရှိခဲ့ ပါဘူး ။
“ကျွန်တော် ဆက်နေမယ် ဆိုရင် MLS အတွက် ကောင်းကျိုးတွေ ရှိလာမှာပါ ။ ကျွန်တော် ဆက်မနေ ဘူးဆိုရင် တော့ MLS ကို ကမ္ဘာကြီးက သတိတောင် ရတော့ မှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး ။ ကျွန်တော် က LAFC ကိုရော ကားလိုစ့် ဗီလာ ကိုပါ နာမည်ကြီး အောင် လုပ်ပေးခဲ့တာပါ” လို့ ဆိုခဲ့ပါသတဲ့ ။ လေနတ်ဘုရား ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ ဟာ ဇလာတန် အတွက် အလိုက်ဖက်ဆုံး ဖြစ်မယ် ဆိုတာ ငြင်းလို့ ရနိုင်မယ် မထင် ပါဘူး ။
ဇလာတန် ဟာ မနှစ် က မေဂျာလိဂ် ရာသီ အကုန် တုန်းက LA Galaxy နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ထပ်တိုးခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် မှာတော့ ဆွီဒင်သားကြီး ဟာ အမေရိက မှာ ဆက်နေဖို့ မရှိတော့ဘဲ နောက်ထပ် အသင်းသစ် ကို ပြောင်းရွှေ့ ဖွယ် ရှိနေ ပါတယ် ။
လတ်တလော မှာတော့ ဇလာတန် နဲ့ ဘယ်အသင်းမှ သတင်းမထွက်သေး ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် စီးရီးအေ ကလပ် နာပိုလီ အသင်း ပိုင်ရှင် ဒီလော်ရန်းတစ် ကတော့ သူတို့ ဟာ ဇလာတန် ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဇလာတန် အတွက် စတုတ္ထ မြောက် အီတလီ စွန့်စားခန်းသစ် ဖြစ်လာ ဖို့ လမ်းစ ဖြစ်လာနိုင် ပါတယ် ။
ဇလာတန် ဟာ ယူဗင်တပ် ၊ အင်တာမီလန် ၊ အေစီမီလန် တို့ နဲ့ အတူ စီးရီးအေ မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ ဖူးပြီး ပွဲပေါင်း ၂၉၄ ပွဲ ကစားခဲ့ကာ ၁၄၈ ဂိုး သွင်းယူ ပေးနိုင်ခဲ့ သလို ဂိုးပေါင်း ၆၀ ကိုလည်း ဖန်တီးပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်း ၃ သင်း စလုံး နဲ့ အမှတ်ပေး ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ တာကြောင့် အီတလီ ဟာ ဇလာတန် ရဲ့ အောင်မြေ စစ်စစ် လို့ ဆိုရင် မှားနိုင်မယ် မထင် ပါဘူး ။
လက်ရှိ နာပိုလီ အသင်း နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီ ဟာ ဇလာတန် နဲ့ PSG မှာ ဆုံခဲ့ဖူးပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်း တွေ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ နာပိုလီ ဆိုတာ ဟာလည်း ကမ္ဘာကျော် ဘောလုံး သမားကြီး မာရာဒိုနာ ကစားခဲ့တဲ့ ကလပ် ဖြစ်ကာ ကောင်းမွန်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါတွေ ဟာ နေရာ တကာမှာ သူ့ရဲ့ အမည် နာမ ကို ချဲ့ထွင်လိုတဲ့ ဇလာတန် အတွက် အသင့်လျော်ဆုံး အခြေအနေ တွေ ပါပဲ ။
ဇလာတန် ကိုယ်တိုင် ကလည်း သူ့ရဲ့ လက်ရှိ အနေ အထား ဟာ အီတလီ စီးရီးအေ မှာ ပြန် ကစားလို့ ရနိုင် သေးတယ်လို့ ခဲ့ သလို သူ အခု ပြန်သွားပါက လက်ရှိ စီးရီးအေ တိုက်စစ်မှုးတွေ ထက် ပိုကောင်းအောင် စွမ်း ဆောင်ပြ နိုင်မှာ သေချာပါတယ် လို့တောင် သိပ် မကြာခင် က ပြောဆို ထားခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။
ဇလာတန် အီတလီ ကို ပြန်သွား မလား ဆိုတာ အတပ် ပြောနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းပေမယ့် အနီးစပ်ဆုံး ကတော့ အီတလီ ပဲ ဖြစ်နေ ပါတယ် ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကိုပြန်သွား ရင်တော့ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးတာ နဲ့ အတူတူ ပါပဲ ။ အီတလီ စီးရီးအေ ရဲ့ ကစားပုံ ဟာ ဇလာတန် လို သက်ကြီးပိုင်း ကစား သမား တစ်ယောက် အတွက် အသင့်တော်ဆုံး အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ် ။
နာပိုလီ ကိုသာ ဇလာတန် ပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ စီးရီးအေ ဟာ ပိုပြီး မြိုင်ဆိုင်လာမှာ ပါ ။ ဘောလုံးလောက ရဲ့ လေနတ်ဘုရားကြီး ကို ဘယ် ဂျာစီ နဲ့ မြင်တွေ့ ရဦးမလဲ ဆိုတာ သိရဖို့ တော့ လအနည်းငယ်လောက် စောင့်ရဦး မှာပါ . . .